Izinhlelo ezi-8 ezinhle kakhulu zokuswayipha ku-PC, Emulator.online ▷ 🥇
Isoftware enhle kakhulu yesilayidi ku-PC
Noma ngubani odinga umenzi wesilayidi angaba nezinketho eziningi, noma azilande kukhompyutha noma azisebenzise online kusiphequluli. Kunamathuluzi akuvumela ukuthi wakhe izethulo ngombhalo, umculo, izithombe namavidiyo. Eziningi zazo, akudingekile ngisho nokuba nesipiliyoni ekusetshenzisweni kwalolu hlobo ukuzenza zibe zinhle. Hlola!
I-Prezi ingaba yindlela ekahle kulabo abafuna ukudala izethulo ezinamandla. Amaslayidi enza ukunyakaza okuhlakaniphile nokusondeza ukuze uqondise amehlo akho kulokho okubalulekile. Kunezinketho eziningi zezifanekiso ezenziwe ngomumo ezihleleka ngokuphelele, lapho ungafaka khona ihluzo, amavidiyo we-YouTube, nezithombe.
Uhlelo lwamahhala (oluyisisekelo) likuvumela ukuthi ulungiselele kuze kufike kumaphrojekthi we-5, abonakalayo kwabanye abasebenzisi bensizakalo. Ungamema abanye abantu ukuthi bahlele umsebenzi wakho ku-inthanethi.
Prezi (mahhala, nezinketho zohlelo lokukhokha): I-Web
IPowerPoint ingenye yamaphayona uma kukhulunywa ngemibukiso yesilayidi. Lolu hlelo lunikeza inqwaba yezifanekiso kanye nemiphumela ehlukahlukene yokushintshwa nemiphumela yokugqwayiza. Kungenzeka ukufaka amavidiyo, izithombe, umculo, ihluzo, amatafula, phakathi kwezinye izinto.
Umsebenzisi angabuye athembele emsebenzini wokurekhoda kwesikrini wesethulo, kufaka phakathi izingxoxo. Kanye nokuthatha amanothi abonakala kuphela kulabo abethula. Isoftware ivame ukuba enembile kakhulu kulabo asebesebenzisa ezinye izinhlelo zokusebenza ku-Office suite.
I-Power Point (okukhokhelwe): Windows | MacOS
I-PowerPoint online (mahhala, nenketho yohlelo olukhokhelwayo): I-Web
3. Umbukiso we-Zoho
I-Zoho Show uhlelo lokusebenza olufana kakhulu ne-PowerPoint, ngenzuzo yokuba mahhala. Le nsizakalo iyahambisana futhi nohlelo lweMicrosoft, ukwazi ukuvula nokugcina okuqukethwe ku-pptx. Ku-inthanethi, ikuvumela ukuthi uhlele ndawonye nabantu abafika kwabangu-5 ngaphandle kokukhokha.
Uhlelo lokusebenza lunikeza inqwaba yamathempulethi wesilayidi nezindikimba, ezingaxubeka kalula. Kungenzeka ufake izithombe, ama-GIF namavidiyo (kusuka ku-PC noma ku-YouTube) bese ufaka izixhumanisi ezivela ku-Twitter nakwamanye amasayithi, njenge-SoundCloud. Kukhona namathuluzi wemiphumela yokuguquka nokuhlelwa kwesithombe.
Umbukiso we-Zoho (mahhala, njengenketho yezinhlelo ezikhokhelwayo): I-Web
4. Izethulo ze-Google
I-Google Amaslayidi (noma i-Google Amaslayidi) iyingxenye yephakeji yeDrayivu. Ngesikhombimsebenzisi esisebenziseka kalula, sinikeza izinketho zetimu ohlangothini lwesokunene kwesikrini. Ukuhlelwa kwesifanekiso kugqanyisiwe kubha yamathuluzi.
Iphrojekthi ingenziwa ngabantu abaningana ngasikhathi sinye, kuphela ukuthi umdali wazise isixhumanisi noma ameme. Uhlelo lokusebenza likuvumela ukuthi ufake isithombe, umsindo, ithebula, igrafu, umdwebo, amavidiyo we-YouTube, njll. Umphumela ungabukwa ku-inthanethi noma ulondolozwe nge-pptx, i-PDF, i-JPEG, phakathi kwamanye amafomethi.
Isethulo seGoogle (kumahhala, kunenketho yezinhlelo ezikhokhelwayo): Iwebhu
5. Ingqungquthela eyinhloko
Uhlelo lwendabuko lokwethulwa kwamadivayisi we-Apple, uKeynote unamathempulethi ambalwa alungiselelwe labo abangafuni ukuchitha isikhathi. Kusenenqwaba yemiphumela yokuguquka. Ungaqokomisa umbhalo ngezithunzi nangokwakheka bese udweba indlela yezinto, njengobunjwa nezithombe.
Umsebenzisi angafaka izithombe, amavidiyo, umculo, phakathi kwezinye izinto. Uma ukuhlanganiswa kwe-iCloud kunikwe amandla, kungenzeka ukuhlela nabanye abantu, noma ngabe basebenzisa iWindows. Uhlelo lokusebenza lungafunda amaphrojekthi we-pptx bese uwagcina ngefomethi yesoftware ye-Microsoft.
Okuyisisekelo (mahhala): macOS
Okungumqondo kuyindlela yokwenza amaslayidi amahle ngaphandle kokuba nolwazi ngezinhlelo zokusebenza zesethulo. Iwebhusayithi inikeza amathempulethi amaningana, anezinhlobonhlobo zezakhiwo. Kukhona izinketho zamaslayidi ezinoluhlu olufakiwe, izithombe noma amabinzana, umugqa wesikhathi, nokuningi.
Ngakho-ke sebenzisa lezo ozidingayo bese ulahla ezinye. Ungahlela ngayinye bese ufaka izithombe, ama-GIF, amavidiyo, nemisindo, kanye nehluzo ezisebenzisanayo. Ukuphela kwento ukuthi inguqulo yamahhala iyatholakala kwabanye abasebenzisi bensizakalo.
Ngokuqinisekile (kumahhala, kunenketho yezinhlelo ezikhokhelwayo): Iwebhu
7.I-Ice Cream Slideshow Maker
Umenzi wesilayidi se-Icecream kungenye indlela kulabo abakhetha ukulanda uhlelo ku-PC bese basebenza ngokungaxhunyiwe ku-inthanethi. Uhlelo lokusebenza kuhloswe ngalo ukwenza izethulo zezithombe ngomculo.
Kepha kungenzeka ukufaka okuqukethwe kombhalo bese usebenzisa umsindo ohlukile kwisilayidi ngasinye noma ingoma efanayo kulo lonke iphrojekthi. Uhlobo lwamahhala lukuvumela ukuthi ulondoloze umphumela ku-Webm kuphela futhi unikeza umkhawulo wezithombe eziyi-10 ngesethulo ngasinye.
Umenzi wesilayidi se-Ice Cream (mahhala ngezinsizakusebenza ezinqunyelwe): Windows
I-Adobe Spark isihleli esiku-inthanethi esinikeza ithuluzi lesethulo elinembile. Ngaphezu kokukhethwa kukho kwengqikithi, kukhona futhi nokwakheka kwama-slide designs ohlangothini lwesokunene sesikrini. Kungenzeka ukufaka isithombe, ividiyo, umbhalo, umculo ngisho nokurekhoda izwi lakho.
Isikhathi sesithombe ngasinye singashintshwa kalula, ekhoneni elingezansi kwesokudla. Uma ufuna ukudala izandla eziningi, ungabelana ngesixhumanisi noma umeme noma ubani omfunayo. Okuqukethwe kungabukwa ku-inthanethi noma kulandwe ngefomethi yevidiyo (MP4). Le nguqulo yamahhala ifaka ilogo ye-Adobe Spark.
I-Adobe Spark (kumahhala, kepha ukhokhele izinhlelo): I-Web
Amathiphu wokwenza umbukiso omuhle wesilayidi
Amathiphu alandelayo avela ku-Aaron Weyenberg, Umholi we-UX we-TED, iphrojekthi yengqungquthela emfushane, enemixholo eminingi. Okuqukethwe kutholakala ngokuphelele ku-TEDBlog uqobo. Bheka ezinye zazo.
1. Cabanga ngabalaleli
Ungacabangi ngamaslayidi njengethuluzi lesichasiselo ongasekela ngalo isethulo sakho. Kufanele zenzelwe umphakathi, kucatshangelwa ukulethwa kokuhlangenwe nakho okubonakalayo okunezela kulokho okushiwoyo.
Gwema ukufaka umbhalo omningi kakhulu. Ngokusho kukaWeyenberg, lokhu kuhlukanisa izethameli, ezingazi noma zikufunde yini okubhaliwe noma zilalele okushiwoyo. Uma kungekho okunye, hambisa okuqukethwe kuzihloko bese ukubakhombisa ngakunye.
2. Gcina indinganiso yokubuka
Zama ukugcina amathoni ombala, izigaba zefonti, izithombe, nezinguquko kulo lonke iphrezentheshini.
3. Ungadluli imiphumela
Futhi ayisebenzisi izinguquko. Kocwepheshe, izinketho ezinkulu kakhulu zinika isithombe sokuthi ukwethula kwabo kuzoba yisicefe kakhulu futhi kuphela leyo miphumela enehaba ezokhipha izilaleli ekucindezelekeni kwazo.
Khombisa ukusetshenziswa kwalezi zinsiza ngendlela elinganiselayo futhi okungcono kuphela lezo ezicashile kakhulu.
4. Ungasebenzisi ukudlala ngokuzenzekelayo kumavidiyo
Ezinye izinhlelo zokwethula zikuvumela ukuthi udlale amavidiyo ngokushesha lapho isilayidi sivuleka. UWeyenberg uchaza ukuthi kaningi kuthatha isikhathi eside ukuthi ifayili liqale ukudlala futhi umethuli uchofoza iphini futhi ukuzama ukuqala.
Umphumela: isilayidi esilandelayo sigcina ngokukhombisa maduze kakhulu. Ukugwema lezi zinhlobo zemikhawulo, inketho engcono kakhulu ukungakhethi i- ukuzikhiqiza kabusha.
Izicelo zamahhala zokwenza amavidiyo ngezithombe nomculo kuselula yakho
Ungasenza kanjani isibhengezo ku-PowerPoint ngaphandle kokwazi ukuhlela